Ma taqaan qalabka lagu kaydiyo shidaalka gaarigaaga? | Ragga Stylish
Waa maxay hababka ugu habboon ee lagu keydin karo shidaalka gaarigaaga? Dhaqaalaha shidaalka ee gaarigaaga waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu iibiyo nooc gaar ah
Sababtaas awgeed, sannadihii la soo dhaafay nidaamyo kala duwan oo shidaalka lagu keydiyo gaarigaaga.
1 Kororka qiimaha shidaalka gaarigaaga
2 Habka freewheel
3 Saliida ku jirta sanduuqa geerka
4 Dabayshu waxay ku goysay weelka hore
Kororka qiimaha shidaalka gaarigaaga
Maalin kasta waan xaadirnaa cudurdaar badan si kor loogu qaado shidaalka gaarigaaga. Xasilooni darrada siyaasadeed, hoos u dhaca iyo kor u kaca Suuqa Suuqa, qiyamka, iwm, wax kastaaba way u qalmi karaan.
Sidaa darteed, way kacaan nidaamyo cusub oo loogu talagalay in lagu keydiyo shidaalka gawaarida dhexdeeda, ha ahaato gaari koronto oo fudud ama nooc heer sare ah.
Waxaan ku arki karnaa nidaamkan moodooyinka gawaarida ee kala duwan, gaar ahaan kuwa otomaatiga ah. Iyada oo loo adeegsanayo tabo cusub marka aad riixdo jejebiinta, nidaamku waa dhexdhexaad. Biriiga mashiinka waa la shaqeyaa marka loo baahdo.
Dareenkan, nidaamyo ayaa loo sameeyay sidaas ha mashquulin mishiinka si aan loo baahnayn. Tan waxaa lagu dhammeeyaa iyadoo la deminayo qalabka wax lagu rido oo la shido. markii loo baahdo.
Saliida ku jirta sanduuqa geerka
Faa'iidooyinka aaladaha cusubi waxay la mid yihiin qaadista cagtaada gaaska. Sida haddii aan gelineyno qalabka dhexdhexaadka ah. Si kastaba ha noqotee, sida ugu dhakhsaha badan ee aan ugu baahanno awoodda, way soo bixi doontaa oo waxay geleysaa qalab.
Dabayshu waxay ku goysay weelka hore
Waxyaabaha aadka u kordhiya isticmaalka shidaalka, waxaa ka mid ah la xiriir hawada. Markii aan la rogrognay gaariga, kama warqabin bareega. Laakiin maalin leh dabayl xoog leh ayaa muuqata.
Si looga fogaado waxyeeladaan hadda dhowr shirkadood ayaa soo saara nooc indhoole ah. Qalabkani waa xidhan yahay halka kulaylku aanu u baahnayn inuu qaboojiyo. Oo haddana wuu furmaa marka heer kulku kaco. Tan waxaan ku yareyneynaa iska caabbinta aerodynamic inta badan ee aan wareegayo.
Waa inaad taxaddartaa nadaafadda hawo-qaadka hore.
Ilaha sawirka: Badbaadinta haweeneyda Diariomotor
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Sidee loo keydin karaa shidaalka gaarigaaga?
Sida loo siiyo kaarkaaga cardanka saameyn aan caadi aheyn oo ka baxsan xafiiska
Koodhadhka xilligan la huwado ayaa ku soo kordha xarrago